Maitiro Ekudzima Nziyo / maAlbum kubva ku iPhone pasina iTunes | IPhone nhau
Maitiro Ekudzima Nziyo / maAlbham kubva ku iPhone isina iTunes
Ignacio Sala | | iTunes, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Iwo matsva iPhone mamodheru anoramba achitanga kubva ku16 GB, chimiro chisina musoro chero kwaunotarisa, sezvo zvisiri zvechokwadi. Iyo nzvimbo inowanika ndeye 12 GB, iyo iine mitambo mina, mafoto akati wandei nemavhidhiyo uye mimwe mimhanzi. vanokundikana pakushanduka kwekutanga, iyo inotimanikidza kunyatsogadzirisa zvese zvatakachengeta pane yedu kifaa. Mavhiki mashoma apfuura takakuratidza akati wandei mhinduro dzekugadzirisa nzvimbo yekuchengetera pane iPhone, kune avo vese vane 16 GB chishandiso.
Kana iwe usina yekushambadzira mimhanzi sevhisi uye unovimba chete paMusic application pane yako iPhone, uye iwe unoda panguva yakapihwa kuti uwane nzvimbo nekukurumidza, sarudzo yekutanga yekufunga nezvayo ndeyokusunungura nzvimbo yekuchengetera iyi application, iyo yatinogona kuzopora uye kurodha zvakare nekubatanidza iPhone yedu kune komputa.
Sunungura nzvimbo pane yako iPhone nekubvisa nziyo pasina iTunes
Kutanga uye pamberi pezvese, zvinofungidzirwa izvo tine kopi yemimhanzi zvese zviripo pane yedu iPhoneKana zvisiri, iwe unofanirwa kugadzira kopi yapfuura kuti usarasikirwe kana iwe uchida nekukurumidza nzvimbo yekuchengetera (mhando yemavhidhiyo atinorekodha needu mudziyo inotora yakawanda nzvimbo nzvimbo).
Mukati meZvirongwa, tinya pa General> Shandisa.
Wobva wadzvanya pa Manage chengetedzo, uko nzvimbo inogarwa nemaapplication ese atakaisa pane yedu kifaa inoratidzwa.
Dzvanya pa mumhanzi uye ese maalbums atakachengeta pane yedu iPhone anozoratidzwa.
Kuti udzime albam, tinya pa Hora, iri mu Kurudyi kona yepamusoro kuitira kuti ese maalbub anoratidza iyo Dele chikwangwani kumberi.
Kudzima iyo albam iri mubvunzo, isu tinotsvedza munwe wedu kuruboshwe pane chinhu chiri kubvunzwa, kudzamara iyo Delete sarudzo yaonekwa, sarudzo yatichadzvanya kudzima iyo albam iri mubvunzo.
Kana tichida dzima nziyo chete, isu tinofanirwa tinya pane iyo albamo kwairi (usati wadzvanya paHedha) uye woitsvaga. Kana tangoiwana, isu tichaenderera mberi nenzira imwecheteyo, tinya bhatani reHedha uye nekutsvedza chigunwe kuruboshwe pamusoro pe rwiyo rwatinoda kudzima kubva kuraibhurari yedu yemumhanzi yakachengetwa pa iPhone yedu.
Ngatione kana uine rombo shoma kumusangano wekuvandudza uyo Apple uchaita kutanga kwaJune, tinogona kuona nyowani shoma yakatakurwa vhezheni yeTunes, izvo zvinotibvumidza isu kuita maitirwo acho nenzira yakapusa kana izvo zvinotibvumidza isu kushandisa akasiyana manyorerwo kubata mimhanzi kune rumwe rutivi, mifananidzo kune imwe, kunyorera kune imwe…. Saka kuti mashandiro echishandiso haanetsi sezvazviri parizvino.
Ndine chokwadi chekuti handisi ndega mushandisi anongoshandisa iTunes kutaura kopi yemifananidzo iyo ini yandinotora kubva pachigadzirwa kuti zviongororwe. Ini handimboishandise kuisa maapplication kana sync mimhanzi izvo zvandinazvo muraibhurari yangu, sezvo paine zvimwe zvinoshandiswa senge iMazing, izvo zvinotibvumidza isu kuita izvi nenzira iri nyore uye yakasununguka kupfuura iTunes.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Maitiro Ekudzima Nziyo / maAlbham kubva ku iPhone isina iTunes
Jose M Rueda akadaro
Uye album yau2 inobviswa sei?
Pindura kuna Jose M Rueda
Max Biava Rivas akadaro
Unoenda kumushandirapamwe wemimhanzi, tinya pazasi panoti maarubhamu, tsvaga maU2 uye tsvedza kuruboshwe woisa Delete, nziyo dzichadzimwa kunyangwe zita reiyo albha risingaite sezvo richiramba riri mukana wakananga wekudzirodha zvakare , kunyangwe nehurongwa hwandareva hwadzimwa uye hauchazotora nzvimbo, kumbundira.
PS Izvo hazvina kuomarara kudzima zvakananga kubva kumumhanzi application, ini handioni ichi chinyorwa chine musoro.
Pindura kuna Max Biava Rivas
Baba vako akadaro
Uye mune imwecheteyo mimhanzi app unogona julay
Iwe uri mutana
Pindura baba vako
Mario Alberto Vergara Hernandez akadaro
Uye sei kudzima zvachose dzese nziyo dzandinadzo? Ini handitombovada ivo paTunes
Pindura kuna Mario Alberto Vergara Hernández
Album yaU2 yakafanana nehutachiona hweropa. Iyo haigone kudzimwa kubva kumumhanzi app ...
Iyo Apple Watch yakanyatsojeka zvekuti inogona kukwanisa kudzivirira kurwisa kwemoyo